Ngaba amadoda afuna impumlo encinci? | Amadoda aQinisekileyo
Iklabhu yamaGentlemen | | Ukunyamekela, fashion
La impumlo eyindoda ngumphathi weentsomi. Kuyatshiwo ukuba inkulu le impumlo, ubukhulu obukhulu belungu lobudoda lomntu oyinxibileyo. Nokuba yinyani okanye hayi, i impumlo ukugqithisa luphawu lobuntu. Nabadlali abanjengoAdrien Brody okanye uGérard Depardieu banetyala eliphezulu lokuthandwa kwabo kwiimpumlo zabo. Kwaye nangona uTom Cruise wayexhotyiselwe udumo ngesandla sika impumlo obalaseleyo, ekuhambeni kweminyaka wagqiba kwelokuba isebenze. Njengo-Cruise, uninzi lwamadoda namhlanje afuna ukwenza utyando lweplastikhi ukunciphisa ubungakanani okanye ukulungisa imilo yabo impumlo.
La Rhinoplasty (utyando lwezithambiso impumlookwesibini kuluhlu lwabona baceliweyo phakathi kwamadoda. Injongo yolu ngenelelo lotyando kukulungisa zonke iziphene ezichaphazela izakhiwo ezenza i-anatomy ye impumlo (iziphene zolusu, amathambo empumlo, intlala, impumlo okanye ezinye izinto ezinje ngee-turbinates, ezinokuthi ngenxa yeengxaki ezingapheliyo zokwenza umsebenzi, zinokutshintsha ubume impumlo)
Xa ukhetha, kunye nogqirha weplastiki, i impumlo ezinqwenelekayo, amanye amanqaku kufuneka athathelwe ingqalelo: izakhiwo zamadoda zinkulu kakhulu kwaye zomelele kunezo zowasetyhini, ke kufuneka zithathelwe ingqalelo ukuthintela iziphumo zobufazi. Ukongeza, incam ye- impumlo Indoda ngokwendalo inamandla kakhulu kwaye ayichazwanga kakuhle.
Isiphelo sendoda rhinoplasty kufuneka ibe impumlo ngencam yeharmonic, ngqo ngasemva, echaziweyo, eqikelelweyo kwaye ijikelezwe ngokwaneleyo ukuvelisa i-engile ephezulu ye-90 degrees phakathi kwempumlo nomlomo ophezulu.
Las rhinoplasty Indoda inethuba lokuqhutywa ngeempumlo ukuthintela umngcipheko wokushiya amanxeba angaphandle. Nje ukuba utyando lugqityiwe, inkqubo yokuvuvukala ithande ukuba mfutshane kunabasetyhini kuba kuncinci ubuqhetseba kwii-capillaries zolusu. Kwixesha langemva kokusebenza, kubalulekile ukufaka umkhenkce kwiiyure zokuqala ezingama-48 ukuya kwezingama-72, ukuphakamisa intloko yebhedi kangangoko kunokwenzeka kwaye wenze nokucoca impumlo nabafakizicelo ukuthintela ukuthimla. I-avareji yokukhubazeka ziintsuku ezi-4 kwaye ixesha lokubuyisela ziiveki ezi-2 ukuya kwezi-3. Iziphumo zokugqibela zinokuxatyiswa emva kwexesha lokuphilisa impumlo. Inokuba nexesha leenyanga ezi-6 okanye ezili-12.
Ngaphandle kwezakhiwo kunye nemigangatho yobuhle, into ebalulekileyo kukuzazi esipilini. Ukuba oku kuthetha ukuba impumlo eyahlukileyo kunaleyo indalo ibanikile, akukho sizathu sokuthandabuza ukwenza i-rhinoplasty. Nangona kunjalo, ukuba isigqibo asiveli kwingxaki yobuqu, kungcono ukuthatha ixesha lokucinga nokuzamkela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ngaba amadoda afuna impumlo encinci?
Ewe ... impumlo yam ayisiyiyo enye yeeklasikhi, ukuba akunjalo, kodwa kule minyaka idlulileyo kwaye ndoyisa izakhiwo zokufikisa ndaye ndaziqhela. Abantu abathanda mna bathi bubuntu bam, andinakuthetha kakhulu kodwa yinto ebingazukusebenza kum. Kwaye ndithetha ngokwembono yobuhle ngaphandle kokuya "kwiinkcukacha" zotyando kunye noloyiko abandinika lona.
Molo, bendinempumlo enkulu ngokwaneleyo kwaye bendifuna ukuyiqhuba… besele ndinazo iirhinoplasties ezi-1 kwaye andikwazi ukuyifezekisa injongo yam….
kwaye kwimeko yam… ewe… Ndifuna impumlo encinci ... Andizithandi iimpumlo ezinkulu konke konke… ndiyazicaphukela.
Kodwa ndiyabathanda abantu abaneempumlo ezinkulu ze-XD
indoda yaseMexico sitsho
hey wena wey sisiqwenga se-gay fucking abantu abathandana nabantu besini esinye
Phendula kwindoda yaseMexico
Andiqondi ukuba uninzi lwamadoda lufuna impumlo encinci! Impumlo encinci ibonakala intle kumfazi kodwa hayi kwindoda!
Luvo lwam oluthobekileyo.
"IMPAHLA ENKULU NGUMBONAKALISO WOLAWULO, UBUME BOKUQALA NOBUNTU"
molo kakuhle, okwenzekayo kukuba impumlo yam yipoko enkulu okt bendicinga ngokuhlinzwa i-parero iyandoyikisa ukusukela ukuba uneminyaka eli-15 ubudala kwaye ndingathanda ukuba undinike ingcebiso yokwenza impumlo yam incinci ngaphandle kokuthambisa kuba ndi indoda
Ndiyathemba ukuba uncedo lwakho, ..
impumlo encinci noo… kodwa ewe ewe ..
Ewe, i-dick kufuneka iqinisekiswe ukuba bangoonyana bantoni
oh piyi sukuba njalo, thina zifanasini zibi kakhulu ngokuzalwa kwabantu abathandana nabantu besini esinye uthanda i-succcc
Umama wakho! sitsho
Ndiyazi ukuba neempumlo ezigqibeleleyo Abahlobo. Ndikucebisa ukuba uthathe iiglasi ezi-6 ze-chele kwi-PINGA yam! .. kunye nepilisi yokuya exesheni ..
Phendula Umama Wakho!
Ndineempumlo ezincinci emhlabeni abantu abaneempumlo ezinkulu ndiyayithiya
Abantu abaneempumlo ezinkulu baya kuchitha ubomi babo belila
Kwaye ngubani othi onke amadoda ayayithanda impumlo yakho?, Ndibathiyile abafazi abaneempumlo ezincinci kuba abananto imbi okanye banesidima, ndinempumlo enkulu kwaye bendihlala nabafazi abaninzi kwaye andiyeki ukudlala ngothando, asike that It means that many abafazi abafani nawe, uluvo lwakho lubonisa ukuba njengomntu awuxabisekanga, usenokuba umncinci kakhulu kuba abantu abadala abazenzi ezo zimvo
Iprofayile yetanki yeXD
uyawathanda amadoda anempumlo encinci?
impumlo enkulu luphawu ikakhulu lobudoda, amaRoma ayenayo enkulu, kulapho iprofayili yamaRoma ivela khona, kwaye babengenabo na abafazi?
Mnyama iGarca sitsho
Molo, ndineminyaka eli-13 ubudala, uxolo 14 XD Ewe inyani yile, impumlo yam ayonto inkulu ukuyithetha, kodwa inyani kukuba kuzakufuneka bayibone.Ndiseklasini, ndibeke isandla sam impumlo, ukuyigubungela yonke indawo, nokuba umntu udlula ecaleni kwam, uyandijika ajonge ubuso bam, andinike impembelelo kwaye kufuneka ndizigqume.bukeka kodwa kwicala endimanyumnyezi ndinentloni kwaye andinguye Ndonwabile ngomzimba wam iinwele zam zithe nkqo andityebanga kwaye andibhityile kangangokuba masithi ndiphakathi ndiphakathi andide kangako. Ukuthetha ndiqhelekile ukuba nesiphene sam kuphela impumlo yam eyothusayo kancinci kuya kufuneka mbone
Phendula u-El Negro Garca
Ungathini, ndinempumlo evulekileyo, kodwa septum yam kunye nenxalenye yebhulorho yempumlo yam ibukeka inkulu, kungenxa yokuba xa ndandimncinci ndawa ngobuso (Khange ndibeke nezandla zam) kunye ne septum yam Ukophuka kuyenza ibonakale «inkulu» impumlo yam, andilolize kodwa ndiyaqala ukuqaphela ukuba ijongeka imbi. Ndiyenzela neengxaki zempilo, kuba kufuneka ndilale ndivule umlomo kuba andikwazi kuphefumla kakuhle ngeempumlo.